မန္တလေးဂေဇက်နဲ.တာဝန်ရှိသူမျးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မန္တလေးဂေဇက်နဲ.တာဝန်ရှိသူမျးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
- Kyaw SoeAg
Posted by Kyaw SoeAg on May 8, 2012 in News | 19 comments
ကျွန်တော် ပြီးခဲ.တဲ.(၃.၅.၁၂)ရက်နေ.လောက် က ရခိုင်ပြည်နယ်သံတွဲမြို.က မီးဘေးသင်.ဈေးသည် ၊ ကျွန်တော်.ရဲ.နစ်နာမှု တွေကို post ရေးပြီးတင်ပြခဲ.ပါတယ်၊ဆိုင်ခန်းမီးလောင်ခံရတဲ.အပြင် ၊ဈေးကော်မတီ ရဲ.မသမာမှု ကြောင်. လုပ်ငန်းနဲ.မသက်ဆိုင် တဲ.နေရာမှာ ဆိုင်ခန်းနေရာချထားခံရလို.ပါ
Postတင်ပြီး ၂ရက် လောက်အကြာမှာ ပဲ သံတွဲ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ.မှ အမှုဆောင်အရာရှိ နဲ. ဈေးကော်မတီ အပါအ၀င်တာဝန်ရှိသူများ ကိုယ်တိုင် လာရောက်ပြီး ၊ ကျွန်တော် .အား စစ်ဆေးခဲ.ပါတယ်၊ကျွန်တော်ရဲ.နစ်နာမှုတွေကို သေချာစုံစမ်းမေးမြန်းပြီး အခု ဆိုင်ခန်းနေရာ အသစ်ကိုပြောင်းလဲ ချထားပေးခဲ.ပါတယ်
အခုချထားပေးတဲ.ဆိုင်ခန်း က သားငါး တန်းမှာ ပဲဖြစ်လို. ကျွန်တော်. ရေခဲရောင်းတဲ. လုပ်ငန်းနဲ. ပတ်သက်ပြီး အဆင်ပြေပါတယ်၊
အခုလို ကျွန်တော် ကိစ္စ အဆင်ပြေ ရတာ ဟာ မန္တလေးဂေဇက် ကတဆင်.တင်ပြမိလို.ပါ ၊ ပြီးတော. တာဝန်ရှိ လူကြီးများ ကလည်း အောက်ကတင်ပြလာတဲ.နစ်နာမှု တွေကို အလေး ထား ဆောင်ရွက်ပေးလို.ပါ၊
ဒီကိစ္စ နဲ. ပါတ်သက်ပြီး မန္တလေးဂေဇက်မှ Admin များကို ၄င်း၊ သံတွဲခရိုင် စည်ပင်သာယာရေးမှ အမှု ဆောင်အရာရှိ နဲ.တကွ ၊ ဈေးကော်မတီ တာဝန် ရှိသူများကို၎င်း၊ အခြားသောကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများကို၎င်း အထူးပဲကျေးဇူးတင် လျှက်ရှိပါတယ် ခင်များ
ဦးသိန်းထွန်း (ရေခဲ အရောင်းဆိုင်)
၁၂/မဂတ( နိုင်) ၀၁၂၅၇၂
ဆိုင်အမှတ် ၁၀/၄၃ ( ယခု အသစ်နေရာ ချထားပေးသော သံတွဲယာယီဈေးမှ ဆိုင်ခန်းလိပ်စာ)
About Kyaw SoeAg
Kyaw SoeAg has written2post in this Website..
View all posts by Kyaw SoeAg →
သည်စာအရဆိုရင် ကျုတို့ မန်းဂေဇက်ဟာ ပြည်သူကို အကျိုးပြု နိုင်တဲ့ လွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ။ ဘရာကြော်ပါ အိုင်ခူး။
အမှန်တော့ ဒီ ဆိုဒ်မှာ ရေးတာ ဖတ်သွားပြီး အဆင်ပြေအောင် ပြန်လုပ်ပေးတာ..
ဒီဆိုဒ်က သဂျီးက အဲလောက် ပါဝါ မကြီးဘူး.. မျက်မှန် သေးသေးလေးတပ်တာမိုလို့.. ;)
အားလပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်အတွေ့ အကြုံလေးတွေကို
စာစီပီး ဂေဇက်မှာဝေမျှဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်..
အဆင်ပြေသွားတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာတယ်ဗျို့ 
သဂျီးဆို ပုဆိုးခါးတောင်းကျိုက်ြုပီး ထတောင် ကနေပြီ..
ဟုတ်တယ် ဗျ၊ ပို့ တင် ပြီး အခု လို ထိ ရောက် မှု ရှိ သွား တဲ့ အကြောင်း ပြန် ရေး ပေး တာ ကို သဘော ကျ အားပေးပါ တယ်။
ကြာပါပြီ တနှစ် နီးပါး လောက် က အကြောင်း ပြန်ပြော ပြချင် တယ်။
မြေနီကုန်း လန်းဆုံ ပဒုမ္မာ ကွင်း ဘက် ပန်းခြံ ထောင့် ပလက်ဖောင်းကို ခွ ပြီး ကြော်ညာ ဘုတ် ထောင် ဖို့ ဖောင်ဒေးရှင်း ချနေ တုံး မန်းဂေဇက် မှာ ပို့ ရေးတင်လာတာ တွေ့ တယ်။ ဘယ်သူရေးတင်တယ် ဆိုတာ တော့ မ မှတ်မိတော့ ဘူး။
laypai လည်း ဟုတ်တဲ့ အကြောင်း ခွ ကျော် လျောက်ခဲ့ ရ ကြောင်း အဲဒီ ပို့ မှာ မှတ်ချက် ရေးခဲ့ တယ်။
နောက် သုံး ရက် လောက် မှာ အဲ ဒီ ကို ပြန်ရောက် တော့ ပလက်ဖောင်း ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ခွ ဆောက်ထားတဲ့ ကြော်ညာဘုတ် ဖောင်ဒေးရှင်း မရှိ တော့ ဘူး။
အဲဒီတုံး က တိုက်ဆိုင် တာလား မသိဘူး လို့ သံသယ ရှိ ခဲ့ ပေ မဲ့ ခု ပို့ နဲ့ အတူ အဲ ဒီ သံသယ ပြေ ပျောက် သွားပါ ကြောင်း ၀န်ခံ ရင်း မန်းဂေဇက် ဧ။် ထိရောက်မှု အား သိစေအပ်ပါသည်။
ဒီလို သိရတာ ၀မ်းသာတယ်
သံတွဲရောက်ရင်တော့ ရေခဲလာဝယ်ပြီး အားပေးမယ်နော်…. လုံးသာ၊ ဂျိပ်တော့ရွာလေးတော့ သတိရမိပါတယ်။
ကောင်းလေစွ … ကောင်းလေစွ
ကောင်းလေစွ … ကောင်းလေစွ … ဒီလိုဖြစ်သင့်နေတာကြာပါပြီ
ခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ….
အများအကျိုးပြုဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ဂေဇက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါ၏။ နောင်ကိုလဲ ဂေဇက်ကြီး ဒီထက်မက အကျိုးပြုနိုင်ပါစေ။ ဂေဇက်ကြီးသက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေလို့လဲဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ရင်ထဲမှာ အေးချမ်းသွားတယ် ရေခဲရေ…
ဒီလိုဆိုတော့လဲ မဆိုးရှာပါဘူး …
ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ ဆိုတာမျိုးထင်ပါ့…။